I-Tightwad Terror ngoLwesibili - Ama-Movie wamahhala we-7-20-21 - iHorror
Ikhaya Ama-movie ama-Horror I-Tightwad Terror ngoLwesibili - Ama-Movie wamahhala we-7-20-21
Ama-movie ama-HorrorAma-Movie wokusakaza
by UJames Jay Edwards July 20, 2021
Sawubona Tightwads! Kuthiwani ngalokhu kushisa? Phola ngokuhlala ngaphakathi nalawa ma-movie wamahhala avela kuTightwad Terror ngoLwesibili naseHorror.
I-American Mary (2012), ihlonipha i-Alameda Entertainment.
UMary waseMelika imayelana nomfundi wezokwelapha ofundela ukuba udokotela ohlinzayo. Uboshelwe isikweletu, ugcina eseba udokotela ohlinzayo ongaphansi komhlaba ozokwenza zonke izinhlobo zezinqubo zokuguqula iziguli zakhe… inqobo nje uma intengo ilungile.
Le shocker ka-2012 iyisibonelo sokwethuka komzimba eCronenbergian. Ngaphandle kokuthi yayiqondiswe yiSoska Sisters, uJen noSylvia. UKatharine Isabelle izinkanyezi endimeni yokuhola. Bheka i- UMary waseMelika lapha eTubiTV.
I-Innkeepers (2011), inesizotha ngeMagnet Releasing.
Abagcini Bezivakashi imayelana nabasebenzi ababili ngempelasonto yokuvala yehhotela elidala. Indawo yezihambi kuthiwa ihanjelwe abantu, futhi bobabili abasebenzi balitholile idumela. Lapho owayengumlingisi / wamanje ophakathi engena, laba bazingeli abayizipoki banquma ukwenza ukuzithwebula okuncane kwe-parapsychological.
Lokhu kuhlangana kukaTi West ngo-2011 yimuvi enhle kakhulu. Abalingisi bahlanganisa uSara Paxton noPat Healy njengabasebenzi, noKelly McGillis njengodlalwayo. Bukela isibhamu sokugcina eduze kakhulu, mhlawumbe noma kabili uma udinga - kukhona okuthile okusabisayo lapho. Hlola Abagcini Bezivakashi lapha kuVudu.
UZombeavers (2014), ngezilokotho ezinhle zeFreestyle Releasing.
UZombeavers yikho kanye ocabanga ukuthi kuyikho. Kuyibhayisikobho yango-2014 ekhuluma ngeqembu lezingane ezihamba ziye ekhishini elikude echibini ngempelasonto yocansi notshwala. Ngeshwa labo, ichibi ligcwele inqwaba yama-zombie beavers - i-zombeavers, uyayithola?
Lehlaya elihlasimulisa umzimba liyisilima njengoba lizwakala, kepha uma ufuna ukuzijabulisa, yilokhu kuphela. Kubuye kube ukwehla okuhle kwemakrofoni kubalandeli abesabekayo abagulela ukufa kwamazombi. Abalingisi bahlanganisa izindlovukazi ezikhulayo ezikhalayo uCortney Palm, uLexi Atkins, noRachel Melvin, nobani! nguJohn Mayer lowo? Hlola UZombeavers lapha eTubi TV.
Ama-Dark Skies (2013), ngezilokotho ezinhle zeDimension Films.
Isibhakabhaka esimnyama yi-movie ye-sci-fi horror yango-2013 emayelana nomndeni ojwayelekile wasemadolobheni ohlala endaweni ejwayelekile yasedolobheni. Ngemuva kochungechunge lwezehlakalo ezingajwayelekile, umndeni uqala ukucabanga ukuthi bangaba izisulu zento embi. Futhi nokuthile okuthile okuyingozi kungavela ngaphesheya kwezinkanyezi…
Ngokuya ngama-movie wokuthunjwa kwabokufika, Isibhakabhaka esimnyama kahle, omunye wabo. Yenziwe kahle, kepha akukho okungakaze kwenziwe ngaphambili. Abalingisi bahlanganisa uKeri Russell, uJosh Hamilton, noJK Simmons, ngakho-ke kuzokuhambela lokho. Ukubamba Isibhakabhaka esimnyama lapha, nakwiTubiTV.
Izingane (2008), ngezilokotho ezinhle eGhosthouse Underground.
Izingane yindaba yemindeni emibili eya ekhaya elingalodwa emakhaya ngeholide lasebusika. Lapho lapho, zonke izingane ezincane ziyagula - bese ziphenduka zizibulale bese zihlasela abantu abadala.
Lesi kumele sibonwe ngabalandeli besimo sezingane esesabekayo esingakaze sibonwe. Izingane ezingababulali ziyashuba ngokwanele, kepha le filimu yaseBrithani yase2008 nayo iphonsa ezigcawini eziningana zodlame okufanelekile ngokuphelele. Iphinde idlale nemizwa kancane ngoba, kahle, lezi yizingane… ubavimba kanjani ukuba bangabulali ngaphandle kokuzihlukumeza wena ngokwakho? Thola ukuthi abantu abadala abakwifilimu bakwenza kanjani (noma ungakwenzi) lapha, futhi kuTubiTV.
umary waseMelikaisundu le-cortneyisibhakabhaka esimnyamaMahhalaAmabhayisikobho wamahhalaAma-movie wamahhala ku-inthanethiUJK SimmonsUJen SoskaJohn MayerUJosh HamiltonUKatharine IsabelleUKelly McGillisKeri RussellULexi AtkinsUPat HealyURachel MelvinUSara PaxtonOdadewabo baseSoskaUSylvia SoskaizinganeAbagcini BezivakashiTi Westi-tightwad terror ngoLwesibilii-tubi tvi-tubitvvuduUZombeavers